Robert De Niro wuxuu ku dhaawacmay goos gooska filimka Killer of the Flower Moon | Waxaan ka socdaa mac
Robert De Niro wuxuu ku dhaawacmay goobta filimka Dilaaga Ubaxa Dayaxa
Dhowr toddobaad ka hor, Filimkii Martin Scorsese ee xigay loogu talagalay Apple TV +, sidaas waxay ahayd waqti go'an kahor intaan filimku bilaaban. Toddobaadkii hore, Leonardo DiCaprio ayaa la wadaagay sawir laga soo qaaday filimka iyada oo loo marayo kanaalka Twitter-ka, isagoo xaqiijinaya inay mar horeba bilaabantay.
Mid kale oo kamid ah shaneemooyinka waaweyn ee filimada oo qeyb ka ah ku dhowaad dhammaan filimadii Martin Scorsese, oo uu kujiro kan dambe waa Robert De Niro. Si sax ah jilaagan, waxaa ku dhacay shil yar, oo markii hore la sheegay inuu ahaa intii lagu jiray duubista filimka.
Sida laga soo xigtay TMZ dhexdhexaad:
Robert De Niro wuxuu kusii jeedaa gurigiisa ka dib dhaawac soo gaaray isagoo ka shaqeynaya mashruuca Martin Scorsese ee soo socda ee aadka loo sugayo ee Leo DiCaprio.
Ilaha wax soosaarka iyo sidoo kale ilo laxiriira De Niro ayaa noo sheegaya in jilaagan uu lugta ka dhaawacmay xili uu duubayay "Killers of the Ubaxa Dayaxa" Oklahoma
Duulimaad ayuu qaatay goor dambe oo khamiis ah gurigiisa oo ku yaal magaalada New York waxaana lagu wadaa inuu Jimcaha la kulmo dhakhtar Baaxadda dhaawaca ma cadda.
Maalmo kadib, isla warbaahintu waxay xaqiijineysaa in DeNiro uu soo gaaray dhaawac inta magaalada loo joogo duubista, maahan inta filim duubayo. Warbaahintu sidoo kale waxay qortay in duubista filimka ay usocoto sidii loogu talagalay, maadaama DeNiro uu horay u toogtay muuqaaladii loo baahnaa waqtigaas iyo goobtaas.
Xilligan ma cada inta uu la egyahay dhaawaca, laakiin waa inaysan noqon wax culus. Waxay u badan tahay, maalmaha soo socda, isla barnaamijkan 'tabloid media' ayaa noo sheegi doona waxa ku dhacay jilaagan rugcadaaga ah ee 77 jirka ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Robert De Niro wuxuu ku dhaawacmay goobta filimka Dilaaga Ubaxa Dayaxa
MacOS Big Sur 11.4 Release Musharax oo loo sii daayay horumariyeyaasha